Sonos Beam, anyị na-enyocha ikekwe ụda ụda kacha mma | Akụkọ akụrụngwa
Sonos Beam, anyị nyochaa ikekwe ụda ụda kacha mma
Anyị alaghachi na ibu na nyocha nke ngwaahịa dị oke mma, ọzọkwa ọ bụ mbinye aka Sonos onye kpebiri na anyị ga-eso ya chọpụta ihe igwe okwu ụda a pụrụ iche na-ezo, nke karịrị nke ahụ, dịka ngwaahịa ọ bụla.
Anyị nwere n'okpuru igwe onyonyo anyị Sonos Beam, anyị na-agwa gị njirimara ya, ọnụahịa ya ma anyị na-enyocha nkọwa niile. Echefula na nyocha a na-adọrọ mmasị iji chọpụta ihe na-eme Sonos Beam nke a na-ekwu maka ya pụrụ iche, yana ihe adịghị ike ya.
1 Uwe na ihe: Ihe Sonos jiri anyi mee
2 Njikọta na Akụrụngwa: Ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla
3 Da na ike nke Sonos Beam a
Uwe na ihe: Ihe Sonos jiri anyi mee
Sonos adighi eme nmehie nke iji ihe ojoo, nke ejiri ihe di ntakiri mee, nke a ma ama ugbu a, na-eme ka o kwe anyi omume inwe ngwa ahia Sonos n’ime ulo ma obu ulo n’ime ulo anyi n’agbanyeghi uzo anyi nwere N'ezie, ọ bụ naanị ụmụ nwoke nọ na Sonos maara ka esi eme ngwaahịa dị oke ọnụ ma dị mma iji nwee ike ịhụ ya n'anya. Nke mbu, Sonos Beam a na-enye anyi otu nke 651 x 100 x 68,5 mm, akụkụ ndị na-esonyere ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 n'arọ nke ibu, Ndị na-ekwu okwu Sonos na-ekwupụta ibu arọ, doo anya agaghị adị obere.
Ka ọ dị ugbu a, emepụtara ya na plastik nke na-egosipụta akara ahụ, na-enye ya n'ụdị agba abụọ: oji na ọcha. A na-etinye ngwaọrụ ahụ na akwa "acoustically transperent" kpamkpam site na ihu na azụ, na-agafe n'akụkụ ya. Nke a Sonos Beam gbara gburugburu, dị ka na-ezere mgbe niile ma na-anwa iji nweta nkwekọ na imewe. N'elu, dị ka n'okpuru, ọ dị larịị kpamkpam, ọzọkwa minimalism pụtara ìhè, ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ya ihe ijuanya iji onye na-ekwu okwu Sonos bụ onye na-eme ihe na-abụghị ọla. Nwere ike ịhụ agba abụọ na njikọ a.
Ejiri aha e dere na vinyl na-eduzi n'ihu ya, mgbe maka akụkụ nke elu anyị na-ahapụ etiti nke njikwa njikwa mgbasa ozi na ntanetị, yana akara ngosi okwu nke na-anọchite anya njirimara enyemaka olu nke Sonos Beam nwere (nsụgharị Spanish nke Alexa ka ga-eche ...). Na azụ obere ntinye ga-abụ ụlọ nke njikọ na bọtịnụ mmekọrịta iji mee ka ndụ anyị dị mfe.
Njikọta na Akụrụngwa: Ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla
Ka anyị kwuo banyere wiring na mbụ, ike ọkọnọ yiri ka enwere njikọ site na eriri igwe, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ezie ọkọlọtọ dakọtara na ọtụtụ eriri dị ka ndị nke Sony na-ejikarị eme ihe. Maka akụkụ ya anyị nwere njikọ LAN (Ethernet) maka ndị na-enweghị ezigbo netwọkụ WiFi n'ime ụlọ yana eriri HDMI AKA nke ahụ ga - enyere anyị aka ijikọ ya na igwe onyonyo anyị. Nke a HDMI USB ARC bụ otu n'ime ndị ngwaike nke ngwaike ahụ, ekwesịrị ịdeba ama na anyị nwere obere enyi anyị na-atụghị anya ya, HDMI ka Ngwa anya eriri na anyị chọtara nkọwa obi ọjọọ na Sonos.
Bluetooth (ọ bụghị maka ụda kama maka njikọ mbụ)
2,4 GHz na 5 GHz dual band WiFi
Enyemaka olu: Alexa na Google Home (ejidere na Spain)
HDMI nkwụnye> Optical USB
Ọ dị mfe ma ọ bụrụ na anyị achọghị eriri, nke ahụ bụ ihe e mere maka ya, n'ihi na na mgbakwunye na ịnwe ike ijikwa TV site na HDMI ARC anyị nwere atụmatụ niile Sonos na-enye anyị site na ngwa ya dị ka njikọ nke aka nke Spotify, Apple Music na ọtụtụ ndị ọzọ na-eweta egwu na-egwu egwu, na Beam karịrị nnọọ ụda mmanya, n'eziokwu m ga-asị na ọ bụ ụda mmanya yana bụrụkwa ezigbo ọkà okwu Sonos. Maka nke a, anyị ga - erite uru na sistemụ mgbakwunye na - play system ya, n'ihe na-erughị sekọnd atọ anyị ejirila ngwaọrụ rụọ ọrụ n'ụzọ zuru oke, akara ngosi nke akara ngosi ahụ.
Da na ike nke Sonos Beam a
Ọ baghị uru ikwu, ọkà okwu a na-egosipụta ya 4 elliptical shaped woofers na nzaghachi ugboro ugboro, atọ n'ezinụlọ radiators nke ahụ na-eme ka mmepụta bass dịkwuo elu site na ịnye ntakịrị ntụgharị, na a tweeter nke dị oke mkpa ịkpọ Sonos Beam ụda mmanya. Ọ bụrụ n’ịju anya ihe kpatara ya, ọ bụ maka na tweeter a ga-abụ nke ga-emesi mkparịta ụka ahụ ike mgbe anyị na-ekiri ihe nkiri ma ọ bụ dịka ọmụmaatụ akụkọ, na-enweghị mkpa ụda ụda ndị ọzọ iji kpuchie ozi ha chọrọ inye anyị.
Inye ogo dị mma anyị nwere ise klas D dijitalụ amplifiers, na n'agbanyeghị na Sonos dọrọ anyị aka ná ntị na ọ bụ ihe ngwọta maka obere ụlọ na obere, anyị doro anya banyere ihe Play: 3 ma ọ bụ Play: 5 nwere ike, yabụ na anyị atụghị anya na obere Sonos Beam . Ntị anyị adịghị aghọ aghụghọ, ekwenyere m n'eziokwu na ọ karịrị ezughị maka ụlọ ọkọlọtọ (n'eziokwu m chere na enwere ọtụtụ), ma ọ bụrụ na enwere obi abụọ, anyị nwere ike iso Sonos One soro ya mgbe niile maka ọtụtụ ụlọ ya sistemụ. Ka ọ were, Anyị nwere ike ịnụ ụtọ ma stereo PCM na akara ngosi Dolby Digital 5.1Agbanyeghị, anyị tufuru Dolby Atmos ma ọ bụ DTS ndị ama ama na ọdịnaya BluRay.
Na nkenke, ekwesịrị m ikweta na o siiri m ike ịghọta etu ụmụ okorobịa nọ na Sonos siri nwee ike itinye obere ihe ntakịrị, agbanyeghị na ekwesighi iju m anya ịtụle na anyị anwalela ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ nke ika ahụ. ma ha enyela anyị otu mmetụta ahụ, na ihe egwu na nyocha ahụ nwere ike ịdị ka enweghị isi, Ekwesịrị m ịsị na Sonos adịghị emechu ihu (ruo ugbu a…).
N'ikwekọ na nke gara aga, nchịkọta dị mfe: Osisi Sonos Beam a na-ada ụda ma ọ dị mma. Agbalịrị m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ike niile ọ na-enye ma enweghị m ike ịchọpụta iota nke "unyi" ma ọ bụ ịdị mma dị mma, agbanyeghị onye na-eweta ya, ma ọ bụ Spotify, Apple Music ma ọ bụ telivishọn n'onwe ya. Ekwesịrị m ịsị na ịnụ ụtọ aha na Netflix na ogwe ụda a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahụmịhe okpukpe, ọbụnakwa karị ma ọ bụrụ na ị lelee ngwaahịa ndị Samsung, Sony ma ọ bụ LG na-enye na ọnụahịa ndị yiri ya, yana n'agbanyeghị agbanyeghị ịnye ụda nke dị nnọọ mma, ha dị n'azụ maka njikọta, nke ahụ bụ Sonos Beam, Achọrọ m igosipụta, ọ bụghị naanị ụda mkpọtụ. Bass ahụ dị mma, nha nha ahụ ziri ezi ka ọ ghara ịlafu njirimara na subwoofer ọzọ anaghịzi efu (n'ọnọdụ m enwere m otu na Sony soundbar), ọ bụ ihe kachasị achọ ịmata ihe setịpụrụ.
Agbanyeghị, ana m akwado ka gị na onye nhazi ahụ nwee ezigbo oge, n'ihi na mgbe ihe nkiri ahụ nwere njikọta nke mkparịta ụka na mkparịta ụka, anyị nwere ike ịchọta bass na-ekwusi ike, nke dị mma maka ige Reggaeton ntị n'ụlọ, mana ọ bụghị nke ọma. lee ihe nkiri n’etiti abalị n’ụlọ anyị, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe ị na-eche ruo mgbe i gwuru n’ime ngwa Sonos wee chọta ihe bara uru Ọnọdụ abalị, nke na-eji ọgụgụ isi nke ngwaọrụ eme ihe iji ghara ikwe ka mgbaàmà ya hapụ ụlọ ma belata nsogbu ahụ na-enweghị ịda mba.. Ọ bụ n'ihi nke ahụ Anyi aghaghi ima ihe bara uru na ikike nke ogwe a di nma ka anyi nwee ike imeghari ya n’oge na onodu. Da ezuru oke, karịsịa na-atụle ntụgharị ya.
Ahụmịhe onye ọrụ n'oge a nwere ike ọ bụghị dịka ọkụ dị ka ngwaahịa ndị ọzọ Sonos, lekwasịrị anya na ịge egwu. Ngwaahịa a lekwasịrị anya karị, na na bụ ya mere na anyị ga-uru nke ngwa ya na-akpụzi ọdịyo dị ka plasticine ma si otú na-enye anyị arụmọrụ na ike-atụ anya site na ihe dị ka nke a. Ọ bụrụ na anyị ga-atụnyere ya na sistemụ Denon yana DTS, ikike 7.1 nke ga-ada ụda karịa, anyị na-efu ogbugba. Ihe na - eme Sonos a ka ọ pụta ìhè bụ etu esi egosipụta ya, ogo ya na njikọta ya. Ikekwe ana m ahapụ mmanụ a honeyụ niile n'egbugbere ọnụ m iji nwalee otú ọ na-esi agbachitere onwe ya na Alexa, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ kwekọrọ n'ụzọ zuru oke na AirPlay 2 ya mere na ijikọ ya n'ime usoro akpaaka nke ụlọ m dị mfe.
Sonos Beam nyochaa
Aghaghị m ikweta na anọ m na-enwe olileanya Sonos ga ẹkedori ihe dị ka na, nke mbụ niile n'ihi na anyị hụrụ ya si Euro 449 na agba abụọ dị na Amazon, Ọ bụghị otu n'ime ngwaahịa ndị a na-ewere dị ka "oke ọnụ" nke ụlọ ọrụ ahụ. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ihe jupụtara ebe nile:
Akụrụngwa na ọdịdị
Ka na-eche mebere na-enyere aka
Kwesịrị idozi nhazi ụda nke ọma
Na-achọ ọtụtụ ihe na ịdị mma: Nke a Sonos ga-enye ụda dị mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njikọta zuru oke, nhazi dị mma na ọnụahịa dị oke ala.
Na-achọ ụda Hi-Fi: Mgbe ahụ ị kwesịrị ị na-aga ụdị ngwaahịa ndị ọzọ, emeghị ya maka oke ịchọ, mana maka ndị na-arịọ maka ihe karịrị ụda.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụda mmanyaMa ịchọrọ onye ọkà okwu mara mma, biko nabata Sonos Beam a n'ihi na a na-enye ya ihe niile, ọ ga-esiri gị ike ịhapụ ihe iji ngwaahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Sonos Beam, anyị nyochaa ikekwe ụda ụda kacha mma
Xiaomi na Pocophone ohuru ohuru ya ma gbasaa ahia site na onu ahia ya
Etu esi kenye vidiyo IGTV na Facebook